Horudhac: Wax walba oo aad uga baahan tahay kulanka adag kooxaha Mogdisho City Club Iyo Elman ee horyaalka Somali Premier League – Gool FM
(Muqdisho) 14 Jan 2020. Kooxaha Mogdisho City Club iyo Elman Fc ayaa ku balansan garoonka Eng Yariisow, ciyaar qeyb ka ah tartanka horyaalka Somali Premier League, waana kulankii 15-aad ee laga ciyaarayo horyaalka fasal ciyaareedkan 2019-20,
Kulanka ayaa ah mid aad u xiiso badan waana ciyaarta loogu magac daray Derby Capital ama kulanka Caasimada, labadan kooxood ayaa ah kuwa isla xisaabtama marka ay timaado kubadda cagta.
Tani waa ciyaarta mideysa labada taageerayal ee kooxahan maadaama garoomada lagu arko marka ay dheelayaan labadan kooxod buun ay wata taageeryasha labada dhinac iyo sawaxan aan xad laheyn, waana sabata aan ugu aragno inuu yahay kulanka ugu weyn horyaalka.
Labadii kulan ee ugu dambeyay ay isku arkeen labadan kooxood horyaalkii la soo dhaafay waxey ku kala baxeen bar-bardhac, iyagoo ku kala dhamaaday 1-1 iyo 2-2, taas oo ka dhigan iney kala qaateyn dhibcaha.
Sido kale sanadkii la soo dhaafay waxey isku arkan tartanka General Daa’uud heerkiisa guruup-yada waxaana xiligaas 2-1 ku adkaatay wiilasha Mogdisho City Club.
Daadir Aamiin ayaa ka hor imaan doona kooxdiisii hore ee Elman, isago iminka macalin labaad u ah naadiga Mogdisho City Club.
Kooxda Mogdisho City Club kulankan waxaa dhaawac ugu maqnaanaya xidigeeda lagu magacaabo Xasan Santos, kaas oo ku seegaya dhaawac dhanka jilibk ah.
Si lamid ah kooxda Mogdisho City Club waxaa kulankan ka maqnaanaya goolhayaheeda cajiibka ah ee Saciid Yamani, kaasoo ku soo dhaawacmay waajibaadka xulka qaranka Soomaaliya.
Wiilasha lagu naaneyso jaalayasha ee Elman kulan ciyaareedkan waxey weyn doonaan xidigooda daafaca ugu ciyaara ee Bile Cilmi Wehliye kaas oo dhaawac ku seegaya ciyaartan.
Kooxda kubadda cagta Elman ayaa kulankii ugu dambeyay horyaalka waxey 4-1 ugu soo adkaatay naadiga Jazeera Sports Club.
Naadiga Mogdisho City Club ciyaartii ugu dambeysay waxey bar-bardhac 0-0 ah la soo gashay kooxda ay coltaman ee Horseed fc.
W/D Cabdifitaax Naani.
“Waan ooyi doonaa marka uu Lionel Messi ciyaaraha ka fariisto”